Dhaleeceeyn loo jeediyey qalabka waxbarashada ee nidaamka SFI - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Cashar ka mid ah casharrada SFI. Sawirle: SR
Dhaleeceeyn loo jeediyey qalabka waxbarashada ee nidaamka SFI
La daabacay tisdag 27 augusti 2013 kl 11.51
Shirkadaha soo saarka buugagta iyo macallimiinta wax ka dhigta dugsiyada ajaaniibta lagu ee baro luuqadda iswiidhishka (SFI) ayey saaran tahay masuuliyadda ah in ardeydaasi helaan buugagta ugu tayada wanaagsan ee tacliinta barashada luuqadda iswiidhishka. Waana howl ay baahiyi ka taagan tahay aqoonta iyo dhumucda culuunta ku qoran, sida ay sheegtay Karin Sandwall Åsberg oo ka howl-gasha xarunta dhexe ee barashadda luuqadda iswiidhishka ee ajaaniibta ee jaamicadda Istockholm.
- Nooma aaney suurtagelin inaan hubinno buugatii la soo saarey dhowrkii sannadood ee ugu dambeeyey, mana ahayn howl aan sidaa u qiimeeyney. Sidaa-daraadeed waxaa jirta baahi weyn ee loo qabo middaa iyo in hubin lagu sameeyo buugagta laga barto luuqadda iswiidhishka ee loogu talo-galey ardeyda ajaaniibta ee barata luuqadda iswiidhshka ee la soo saarey sannadihii ugu dambeeyey.
Horay ayaa dhaleeceeymmo looga soo jeediy ku wajahan buugagta lagu qaato xarummaha wax-barashada ee luuqadda iswiidhishka, nidaamka waxa loo yaqaanno SFI (Svenska för invandrare – barashada luuqadda iswiidhishka ee ajaaniibta).
Buugagta ayey ku qeexan yihiin sawirro sida caadiyan ah laga qabo jinsiyadaha iyo dhalashooyinka (qoowmiyadaha) kala duwan, sida uu sheegay Sedigheh Tabibzadeh oo ka howl-gala rugta buugagta .
Sidoo kale waa dhaleeceymo horay u jirey oo ay Karin Sandwall Åsberg aan dhegeheeda ku cusbeyn, sida baaritaanno horey loogu sameeyey qalabka lagu barto luuqadda iswiidhishka ee iskuullada SFI:
- Sida cilmi-baarisyadu horeyba u muujiyeen waxaa jira buugagta qaarkood oo lagu dhaleeceeyn karo habka ey u soo ban-dhigaan qowmiyadaha ajaaniibta iyo kuwa iswiidhishka iyo waxyaalaha dabiiciyanka dalkan uga dhaca.
Yeey saaran tahay masuuliyadda ah in dadyoowga dhigta wax-barashada dadka waaweyn iyo iney helaan buugag aaney ku oolin waxyaalaha qaarkood?
- Dalka Iswiidhen kama jirto hayad ay howsheedu tahay sidii ey u hubin lahayd qalabka wax-barashada, marka waa macallimiinta iyo sidoo kale shirkadaha soo saarka buugagta oo ay middaasi ka saaran tahay masuuliyad aad u ballaaran iyo in buugagtoodu la jaanqaadi karaan qorshaha tacliinta.